#Jorge Valdano:Bale Oo aan aheyn Mudnaanta Kowaad ee Zinedine Iyo Real Madrid - Get Latest News From Horn of Africa
#Jorge Valdano:Bale Oo aan aheyn Mudnaanta Kowaad ee Zinedine Iyo Real Madrid
Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Jorge Valdano ayaa wuxuu shaaca ka qaaday waxa xal u noqon karo dhibaatada xidiga reer Weles ee Gareth Bale, kaasoo aanan maalmo farxadeed ku heysan garoonka Santiago Bernabéu.
Jorge Valdano ayaa wareysi uu ku bixiyay idaacada Spanish-ka ah “Onda Cero” wuxuu kaga hadlay xaalada adag ee Gareth Bale wuxuuna yiri:
“Waxa Bale ku dhacay waa arin layaab leh, wuxuu wakhti dheer qeelo isaga ka dhan ah kala kulmayay taageerayaasha kooxda, sababtoo ah waxay ka sugayeen wax qabad aad u weyn, gaar ahaan xili ciyaareedkan”.
“Haddii Real Madrid ay dooneyso inay iibiso Gareth Bale, waa inuu si joogta ah u ciyaaro kulamada ka harsan xili ciyaareedka”.
“Balse Zidane wuxuu heystaa dooqyo kale, sababtoo wuxuu doonayo inuu arko ciyaartoyda oo dhan, si uu ugu diyaar garoobo xili ciyaareedka soo socda”.
Si kastaba Real ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso iibinta Gareth Bale xagaaga soo aadan, lakiin weli wax dalab ah ma aysan helin ilaa iyo hatan, waxaana laga yaabaa inay ku fikirayaan in qaab amaah ah ay ku bixiyaan iyadoo heshiiska uu sidoo kale qeyb ka noqon doono in si toos ah loo iibsan karo.
45 mins ago 31,205